Hong Kong: Mametraka Fepetra Amin’ny Fanadiovana Varavarankely Avo Be Mba Hiarovana Ireo Mpanampy An-trano,Tezitra ireo Mpampiasa · Global Voices teny Malagasy
Hong Kong: Mametraka Fepetra Amin'ny Fanadiovana Varavarankely Avo Be Mba Hiarovana Ireo Mpanampy An-trano,Tezitra ireo Mpampiasa
Voadika ny 06 Novambra 2016 8:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, English
Varavarankely fahita mahazatra amin'ireo trano manaka-danitra ao Hong Kong. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube
Tato anatin'ny fito taona nisesy, iray isantaona ireo vahiny tonga mila ravinahitra manao mpanampy an-trano ao Hong Kong no maty mianjera avy eny amin'ireo tranobe manaka-danitra teo am-panadiovana ny ivelan'ireo varavarankely. Taorian'ny fianjerana nahafaty ilay vehivavy Filipiana 35 taona nanao izany taminà efitrano any amin'ny rihana faha-49-n'ny tranobe iray tamin'ny Aogositra, nitondra ny olana ho eny an'arabe ireo fikambanan'ny mpiasa an-trano ao Hong Kong, nitaky tamin'ny governemanta ao Hong Kong handinika ny fiarovana ny ain'izy ireo eo am-piasàna.
Dolores Balladares, mpitondra tenin'ny Filankevi-pitantanan'ny Fandrindràna ireo Aziatka Mpifindra monina, nilaza tamin'ny gazety tamin'izany fotoana izany hoe:
Sarotra ho anay ny handà rehefa ny mpampiasa no maniraka anay hanadio varavarankely, nefa tena mampahatahotra io […] fotoana izao mba hiarovan'ny governemanta ny mpiasa.
Raha tsy namaly avy hatrany ny fangatahan'ireo mpiasa ny manampahefana tao Hong Kong, tamin'ny tapaky ny Oktobra kosa ny kaonsilin'i Filipina dia nanome baiko fa ny fifanarahana asa rehetra ifanaovana amin'ny terataniny dia tokony hisy andàlana milaza fa tsy tafiditra ao anatin'ny andraikitr'ireo mpiasa an-trano ny fanadiovana ny varavarankely.
Araka ny efa niomanana mialoha, nanohitra ireo fepetra vaovao ao anatin'ny fifanarahana asa ireo vondrona misolo tena ireo mpampiasa an-trano. Neken'ny Kaonsilin'i Filipina ny hanemotra ny andro fampiharana ilay fifanarahana vaovao ho amin'ny 14 Novambra, taorian'ny nanairan'ny governemantan'i Hong Kong sy nanekeny ny hiatrika io olana io haingana araka izay tratrany.
Farany, tamin'ny faran'ny Oktobra, nandroso sosokevitra vaovao ny departemanta misahana ny asa ao Hong Kong hoe tokony ho makarakara miantona ary eo ambany fanarahamason'ny olon-dehibe iray ny fanadiovana varavarankely ataon'ireo mpanampy an-trano. Ho an'ireo firenena tena mpanafatra betsaka ireny mpiasa an-trano ireny dia azo ekena ilay sosokevitra, izay manaraka ny fomba fanao any Singapaoro, hoy ny loharano iray avy ao amin'ny governemantan'i Hong Kong. Saingy tsy eken'ireo vondron'ny mpampiasa ilay fitenenana hoe “eo ambany fanarahamason'ny olondehibe iray”, tamin'ny filazàna fa tsy manana fotoana hanarahana maso tahaka izany ny mpanampy an-trano ry zareo.
Tao anatin'ny adihevitra manontolo, marobe ireo mpampiasa no nilaza fotsiny fa tsy zavatra miteradoza ny fanadiovana ny ivelan'ireo varavarankely, ary ny sasany nisisika tamin'ny hoe andraikitr'ireo mpanampy an-trano izany ary tsy maintsy omena fiofanana hanao izany asa izany ry zareo. Ohatra, iray amin'ny fitakian'ireo mpampiasa ny fangatahany amin'ny Departemanta Filipiana misahana ny Asa mba :
hijery ny kalitaon'ireo mpiasa an-trano, tafiditra amin'izany ny fotoana marobe lanin'izy ireny mitelefaonina, ny fitrosàna, ny halatra, ny famefena ny mpampiasa azy ireo, miditra amin'ny asa fivarotantena, ary ireo fitondrantena mahonena tahaka izany. […] Tokony hampianatra ny olony ry zareo amin'izay fomba hahalasa azy ho mpiasa mendrika any ivelany, mba hahafahan'izy ireny mahazo vola vahiny ho an'ny fireneny sy ny fianakaviany.
Tsy mitovy amin'ny efa fahita ilay fijery etsy ambony. Mora hita ety anaty media sosialy ny fanehoankevitra mitovitovy amin'izany. Ireto fanehoankevitra eto ambany ireto dia notsimponina tao amin'ny zohin-kevitra Facebook, an'ny Standnews media tsy maka tombony ety anaty aterineto :
抺窗真係危險嘅 個個都危險啦 咁邊個可以抺呢?! 如果做足安全措施就可以抺, 點解家傭就唔得呢?!
Mety ho ny tena ihany no handidy ny tena rehefa mampiasa antsy, mandoro ny tena rehefa mandrehitra afo, mampangotra rano na menaka na mipasoka akanjo. Midika ve izany fa tsy mila manao ireny andraikitra ireny ry zareo?
Raha nesorin-dry zareo ny andraikiny tsy hanadio varvarankely, tokony koa [isika] hanaisotra izay ampahany izay ao anatin'ny karama aloa isambolana HK $4,120 [eo amin'ny US $550 dollars].
Mitera-doza ho an'ny tsirairay ny fanadiovana varavarankely. Ka iza ary izany no hanao ilay asa? Raha fepetra fiarovana no hany tadiavina, maninona no tsy hanao ilay andraikitra ireo mpiasa an-trano?
Ny ankamaroan'ireo trano vao naorina ho an'ireo saranga antonony ao Hong Kong no trano manaka-danitra misy varavarankely goavana be. Mety hiteraka loza ny filingilingiana mitsingoloka any ivelany hanadio varavarankely. Leo Tang, mpikatroka mafàna fo momba ny asa, no nanasongadina ny tsy fahatomombanan'ny lalàna ao an-toerana amin'ny fiarovana ireo mpifindra monina mpila ravinahitra manao asa an-trano :
Toerana manokana ny trano fonenana, saingy koa toerana fiasàn'ireo mpifindra monina manao asa an-trano. Andraikitry ny mpampiasa ny manome tontolom-piasàna sahaza sy azo antoka. Araka ny didim-panjakàna momba ny fiarovana ny aina sy ny fahasalamàna eo amin'ny sehatry ny asa, tokony ho ny mpampiasa no manome ireo fitaovana sahaza, ary torolàlana aro aina ho an'ireo mpiasany. Kanefa tsy manefa ny andraikitra voalazan'ny lalàna tahaka izany ireo mpampiasa maka mpifindra monina ho mpanampy an-trano. Ny zavamisy dia hoe sady toeram-ponenana no toerana fiasàna ho an'ny 10% amin'ny fitambaran'ireo hery mpamokatra ao Hong Kong no tsy asiana fijerena, ary ireo mpampiasa dia zara raha mahafantatra izay kely tokony ho hainy momba ny fiarovana aina. Vao haingana, tao anaty fandaharana iray tamin'ny fampielezampeo, nisy aza solontenan'ireo mpampiasa nanosoka hevitra hoe afaka mitondra fehikibo fiarovana ireo mpiasa an-trano rehefa manadio ny ivelan'ny varavarankely. Mampalahelo ny sosokevitra tahaka izany — ny fitondràna fehikibo dia midika fa tonga saina amin'ny fisian'ny loza ateraky ny fianjerana avy amin'ny toerana avo ianareo — dia tena manatena marina ve ianareo fa ny andraikitra tahaka izany dia natao ho efain'ireo mpiasa an-trano izay mandray eo amin'ny HK $4,000 [US $550 dollars] isambolana?
Indrisy, tsy zavatra vaovao akory ny faharatsian'ny fomba fitondra atao an'ireo mpifindra monina manao asa an-trano ao Hong Kong. Ny Tondro 2016 momba ny Asa Fanandevozana Erantany, vao navoaka tsy ela akory izay, dia nitatitra hoe olona 29.500 raha kely indrindra amin'ireo vahoaka maherin'ny 7 tapitrisa ao Hong Kong no voafandrika ao anatin'ny endri-panandevozana maoderina. Inoan'ny Justice Center, vondrona iray ao an-toerana miaro ny zon'olombelona, fa mbola avo lavitra noho izany ny tarehimarika satria ny fanarahamaso vao haingana nataon'ilay fikambanana dia nahita fa 17 isanjaton'ireo mpifindra monina miasa an-trano no manao “asa an-terivozona”. Ny tarehimarika dia mira amin'ny 55.000 eo ho eo amin'ireo mpiasa an-trano 320.000 ao an-tanàna.